काठमाडौंमा आजदेखि त्रिदेशीय टी-२० क्रिकेट श्रृंखला सुरु हुँदै - टि. एल. एन पोस्ट
Home खेलकुद काठमाडौंमा आजदेखि त्रिदेशीय टी-२० क्रिकेट श्रृंखला सुरु हुँदै
नेपाल, मलेसिया र नेदरल्यान्डस् सम्मिलित त्रिदेशीय टी-२० क्रिकेट श्रृंखला आजदेखि काठमाडौंमा सुरु हुँदै छ । उद्घाटन खेलमा नेपालले नेदरल्यान्ड्ससँग खेल्दै छ । खेल दिउँसो सवा १ बजेपछि कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा सुरु हुने छ ।
Previous articleप्रधानमन्त्रीको आह्वानमा आज सर्वदलीय बैठक बस्दै
Next articleसर्वदलीय बैठक जारी, को-को छन् सहभागी
पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह सहित माधव नेपालपक्षीय युवाले दर्ता गरे नयाँ दल